Terra Invicta dia mandray ny Franchise XCOM ary manova izany ho lalao paikady lehibe ao anatin'ny vein'ny habakabaka! - Lalao
Terra Invicta dia mandray ny Franchise XCOM ary manova izany ho lalao paikady lehibe ao anatin'ny vein'ny habakabaka!
Ohatra, diniho ny lalao video XCOM ary alaivo sary an-tsaina ny toe-javatra misy ny tena zava-misy izay nahitana fampandrenesana betsaka ny zanak'olombelona ary tsy dia nifanaraka tamin'ny politika manerantany.
Avy eo dia manipy fizika Newtoniana ianao, ary azonao (angamba) ny lalao paikady lehibe nandrasan'ny tenanao.
Novolavolain'i Pavonis Interactive, ekipa ao ambadiky ny mods The Long War an'ny XCOM, ny scenario 'fanafihana vahiny' an'ny lalao dia nofoanana tanteraka mba hamoronana lalao paikady avo lenta izay handresena (na famihina) ny vahiny mandritra ny am-polony taona maro. ezaka. XCOM: Enemy Unknown dia havoaka amin'ny 26 Oktobra.
Ny fandraisan'ny lalao ny lohahevitry ny fikambanana miafina dia tazonina rehefa mandray ny andraikitry ny mpitarika ny iray amin'ireo antoko maro ny mpilalao, izay samy manana ny fandaharam-potoanany manokana, ny fepetra mandresy ary ny toerana ankapobeny amin'ny fisian'ny vahiny mananontanona.
Amin'ny ankapobeny, ny lalao dia miady amin'ny fitaomana sy fifehezana ny governemanta eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny geopolitika izay azo ampitahaina amin'ny zava-mitranga ankehitriny.
Na dia misy aza ny tafika sy fitaovana mahazatra, dia tsy lalao ao amin'ny lalan'ny Paradox izay ezahanao handoko ny sarintany amin'ny sarinao manokana.
Raha te-hiditra amin'ny loharanon'izy ireo ianao ary, indrindra, ny tetikasan'izy ireo an-habakabaka, dia tsy maintsy miezaka ny hifehy ireo governemanta ireo avy ao anatin'ny laharana misy azy ireo ianao.
Ity misy tranofiara tranainy iray izay manome anao hevitra ankapobeny momba ny sarimihetsika:
Mba hampitomboana sy hampivoatra ny rafi-masoandro, dia tsy maintsy manomboka ny hazakazaka eran'izao tontolo izao ianao mba hahazoana fahombiazana amin'ny dingana voalohany amin'ny lalao.
Tsipiriany maro momba ny fomba fiasan'ireo vahiny sy hoe iza izy ireo no tsy voalaza nandritra ny famelabelaranay noho ny ahiahy mpanimba, saingy efa fantatrao fa ho avy izy ireo ary ho fitaovana teknolojia avo kokoa noho ianao.
Ny lalao Terra Invicta, araka ny filazan'i Pavonis, dia haharitra am-polony taona vitsivitsy amin'ny lalao, izay takiana aminao hanosika ny fahafahan'ny zanak'olombelona araka izay tratrany.
Toe-javatra fanombohana maro samihafa no novolavolaina, anisan'izany ny iray ho an'ny tontolon'ny Ady Mangatsiaka ary ny iray hafa ho an'ny toe-javatra sarotra kokoa izay mitsambikina amin'ny fitomboan'ny lalao voalohany.
Misy fomba taktika misaraka ampiasaina amin'ny ady an-habakabaka, ary atao amin'ny fotoana tena izy (miaraka amin'ny fiatoana).
Ity lalao ity dia mampiasa fizika Newtoniana (toy ny zava-misy), ary ny fifandirana dia voarafitra amin'ny fomba mitovy amin'ny an'ny Battlestar Galactica Deadlock, izay manahaka ny ady amin'ny habakabaka.
Mihetsiketsika tsy tapaka ny sambonao, ary afaka manova ny hetsika sy ny toerana misy anao ianao amin'ny fotoana rehetra handraisan'ny mpifanandrina azy.
Amin'izao fotoana izao, amin'ny fampandrosoana, Terra Invicta dia nokasaina havoaka amin'ny Steam amin'ny faran'ny taona 2021. Navoakan'ny Hooded Horse, izay tompon'andraikitra amin'ny habaka RTS Falling Frontier sy ny lalao 4X Alliance of the Sacred Suns.
Fampahalalana nohavaozina momba ny 'Sker Ritual' ho avy Survival Fps dia azo alaina izao!
Hotel Life a Resort Simulator: Famoahana ofisialy, lalao, fahaiza-manao ary fampahalalana bebe kokoa!
Aftermath - Thriller momba ny fahavelomana ara-tsaina
The Protégé: Ny tantaran'ny mpamono olona iray
Ao amin'ny Attack on Titan, nambara ny taonan'i Eren Jaeger: Firy taona i Eren? Hazavaina!
kaody psn miasa maimaim-poana 2015
fomba fampidirana mozika ao amin'ny lalao roblox anao
afaka mampidina sarimihetsika netflix amin'ny macbook-ko ve aho
fampidinana sarimihetsika vaovao maimaim-poana tsy misoratra anarana
sarimihetsika vaovao maimaimpoana an-tserasera nefa tsy misintona na inona na inona
mijery horonan-tsary fa tsy maimaim-poana Download